Ujyaalo Sandesh | » हेलो धनगढीका मेयर सा’प, केही मिनेट फुर्सद छ भने … हेलो धनगढीका मेयर सा’प, केही मिनेट फुर्सद छ भने … – Ujyaalo Sandesh
हेलो धनगढीका मेयर सा’प, केही मिनेट फुर्सद छ भने …
उज्यालो सन्देश January 23, 2020
प्रदेशभरिकै एउटा मात्रै उपमहानगर धनगढी हो भनेर भनिरहनै परेन । उहिले, अहिले र भोली पनि याे ठाउँ सुदूरकाे आर्थिक केन्द्र थियाे, छ र रहिरहने छ । त्यसैले अहिले नि भाैतिक सुविधाका हिसावले, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवालगायतका हिसावले धनगढी ९ वटै जिल्लाको केन्द्र हो भनेर पनि भन्नु पर्ने कुरै होइन । शब्दमा अस्थायी भनिए पनि प्रदेश राजधानी गोदावरी धनगढी एकै सहर हुने पक्का छ । त्यति मात्रै हैन निकट भविश्यमा महानगर हुनेमा पनि खासै द्धिविधा छैन । त्यसैले तसर्थ धनगढी त केवल धनगढी मात्र नभई सुदूरपश्चिमको मुटु हो, शान हो ।
यही धनगढीकाे एउटा सानाे सन्दर्भ कसलाई भनुँ, कसलाई भनुँ भन्ने लागेकाे थियाे । तर नगरको मुख्य अभिभावक तपाई मेयर सा’प हुँदाहुँदै तपाइलाई नै सम्झेर अप्ठेरो मानिमानि नगरभित्र पनि बजार केन्द्र भागमध्ये मुख्य चहलपहल हुने ठाउँको थोरै चित्र यहाँ पस्कने साहस बटुँलेकाे छु । तर पनि तपाइसम्म मेरा यी शब्द र चित्र पुग्लान या नपुग्ला भन्नेमा भने कन्फ्युजमै छु ।
मेयर सा’प, अप्ठेरो लाग्नुको चै खास कारण छ । किन कि मलाइ सुनाउनेहरुले धनगढीका मेयर नृप बहादुर वडज्यू, धनगढीमा भएका बेला हरेक विहान झिस्मिसेमै निस्केर राती अबेरसम्म चलायमान हुनुहुन्छ, जनताकै विकासमा तल्लिन हुनुहुन्छ भन्छन् । याे सुन्दा बेस्सरी खुसी लाग्छ, चाँडै स्मार्ट सिटीकाे बासिन्दा भइन्छ कि क्या हाे भन्ने लाग्छ । हुन पनि कामबाट फुर्सद नभएर कति दिन त मेयर सा’पकाे खाना पनि छुटेको छ भन्ने पनि सुनेकै छौं । धन्न, उहिलेजस्तो पैदल हिड्नु पर्ने भए, भारि बोक्नु पर्ने भए तपाईलाई सारै सास्ती हुने रहेछ । समयले अलि सुविधा छ भनौं न, अहिले पहिलाजस्तो पैदल हिड्नु पर्दैन, बाहिर जानु परे सिधैं एयरपोर्ट । जनताको काममा यतिधेरै दौडधुप गरिरहने हाम्रा मेयर सा’पलाई झिनामसिना कुरा पनि कसरी भन्नु भन्ने लागेर केही दिन रोकिएको हुँ । तर अहः आज चै मेयर सा’पलाई यीनै शब्द चित्रमार्फत भएपनि सानो एउटा विषय नउप्काइ भएन भन्ने लाग्यो ।
मेयर सा’प कुरो चै त्यति धेरै ठुलो छैन है । हा कस्तो कस्तो छ, यति सानोतिनोमा ध्यान दिने फुर्सद त कहाँ हुन्छ र भन्नु होला । त्यो तपाईको विचार । जनता चै ससाना कुरामा पनि अपेक्षा र टिप्पणी गरिरहेका हुन्छन् भन्ने म भन्दा तपाईलाई कम थाहा हुने कुरै भएन ।
जे होस् । मेरो विषय सुरु गर्छु । मेयर सा’प धनगढी बसपार्क नछिर्नु भएको कति भयो ? गजब छ हजुर त्यहाँ त । धनगढीको मुटुमा रहेको ठाउँ, सर्वसाधारण सबैभन्दा बढि संख्यामा ओहोर दोहोर गर्ने ठाउँ, धनगढी आउँदा सुरुमा पाइला टेक्ने ठाउँ यै बसपार्क होइन ? यतिधेरै मोविलिटी हुने ठाउँको अवस्था र व्यवस्थापनले धनगढीमा पाइला टेक्नेले त्यही आधारमा धनगढीको सभ्यता र विकासप्रतिको प्रसेप्सन नबनाउला ?
तपाई स्मार्ट सिटी बनाउने अभियानमा रहेको चर्चा मेरेको छैन है मेयर सा’प । तर त्यो भन्दा अगाडी एकपल्ट ५ मिनेटजटि कुनै कार्यक्रमको भाषण छोट्याएर पोहोर मात्र निर्माण भएको तपाईहाम्रो बसपार्कको अवलोकन गरिदिनु होला है । मेरो मात्रै दायित्व कहाँ हो र ? कसको के के दायित्व हुनुपर्छ यस्तोमा भन्ने छलफल आगामी दिनमा गर्दै गरौला । यति बेला चै तपाईले बसपार्क अवलोकन गरिसकेपछि मे कस्तो महसुस गर्नु हुन्छ भन्ने मात्रै अहिलेलाई जिज्ञासा छ । मलाई त यो अति हो भन्ने लागेको छ । बसपार्क सञ्चालनको संरचना होला, पैशा पनि गजबकै उठाउँछ नगरपालिकाले भन्ने पनि थाहै हो । अहिले त धनगढीमा सबैभन्दा गजबका व्यापारिक भवनहरु बसपार्कमै बन्दैछन् धमाधम । होटलहरु पहिलाभन्दा राम्रा घरमा छन् । तर आँगनै अगाडी हेर्नु त १ हैट । तर त्यसतो महत्वपूर्ण ठाउँको फोहर व्यवस्थापनके अवस्था हेर्नु त । कसैलाई कुनै मतलव छैन । त्यहाँ खटिएका प्रहरी भन्नु हुन्थ्यो नगरपालिकाको टिप्पर त कहिलै पनि बसपार्कभित्र छिर्दैन रे । दैनिक फोहर उठाउने कुरो त छदैछ, त्यहाँ फोहर फाल्नै नपाइने कडा परिपत्र जारी गर्न त मिल्ला नि । बस त्यहाँभित्र धुन नपाइने भन्न त मिल्ला नि, त्यहाँ बस्नेहरुलाई उत्तरदायी बनाउन मिल्ला नि । हेरौ, मेयर सा’पको ध्यान कत्तिको जान्छ .